ဘေးကင်းလုံခြုံမှုယဉ်ကျေးမှု - Afrikhepri Fondation
Par Afrikhepri ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ဖတ်ပါ - ၃ မိနစ်
Dသူ Frankfurt am Main တက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒပညာရှင်များသည်အုံကြွမှုများကိုနှိမ်နှင်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခသည်များပြန်လည်နေရာချထားခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားသုတေသနအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဂျာမနီသုတေသနနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ၀ န်ကြီးဌာနမှယူရိုသန်းပေါင်းများစွာလက်ခံရရှိသည့်ဤစီမံကိန်းများကို“ အရပ်ဘက်လုံခြုံရေးသုတေသန” ဟုခေါ်ပြီးအခြားယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးပconflictsိပက္ခများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အနောက်ပိုင်းမြို့ပြများတွင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအစုလိုက်အပြုံလိုက် "။ “ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောလုံခြုံရေးယဉ်ကျေးမှု” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းရန်သူများ၏ကျူးကျော်မှုများကိုတန်ပြန်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုနှင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအစီအမံများကိုဂျာမန်လူ ဦး ရေမှမည်မျှအတည်ပြုပေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Frankfurt မှငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသီများသည်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများရှိအနောက်တိုင်းစစ်တပ်၏ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်နည်းဗျူဟာများကိုတီထွင်နေကြသည်။ ဤသုတေသန၏ Corpus သည်“ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး” ၏မေးခွန်းများကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြင့်ပြီးစီးသည်။ အကြမ်းဖက်မှု၊ ကူးစက်ရောဂါ၊ ပြည်ပမှစစ်ရေးအရ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု၏ "အဓိက" တာ ၀ န်သည်ရှုပ်ထွေးသောလုံခြုံရေးပေါ်လစီအချက်အလက်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရိုးရှင်းသည့်သတင်းစကားများအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။
Frankfurt တက္ကသိုလ်၏ Johann-Wolfgang-Goethe တက္ကသိုလ်မှလူမှုရေးသိပ္ပံတွင်ထူးကဲကောင်းမွန်သော“ ပုံမှန်ဓလေ့ထုံးစံများဖွဲ့စည်းခြင်း” သည်မကြာသေးမီက Frankfurt Westend ကျောင်းဝင်းရှိအဆောက်အအုံသစ် (ယူရို ၁၁ သန်းကုန်ကျသည်) သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ မြေနေရာ (တိုင်းဒေသကြီး) နှင့်အခြားပြည်နယ်တစ်ခုကငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်း၏မျက်နှာစာ၏ဒီဇိုင်းကြောင့် "ထူးခြားကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခု" နှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုဘဏ္ofာရေး ၀ န်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်း၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပသည့် Hesse မှ Luise Hölscher  ။ Hölscherမှထွက်ပေါ်လာသော“ တစ်ခုလုံး” သည် IG-Farben ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုနေရာတွင်နာဇီအစိုးရလက်အောက်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သောအဆောက်အ ဦး ကလွှမ်းမိုးထားသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုနေရာများ။ အော့ဇ်ဝစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ချွေးတပ်စခန်းရှိခဲ့သောဤကုမ္ပဏီသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျာမနီကသိမ်းပိုက်ထားသောနိုင်ငံများ၏လုယက်မှုများနှင့်အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းသူများကိုအမြတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ယခု IG-Farben ကျောင်းဝင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်“ သာမန်ထုံးစံဓလေ့များဖွဲ့စည်းခြင်း” ၏ဗဟိုအချက်အချာကျမှု (အရင်းအမြစ်များဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခများ) သည်“ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်” ကိုဆန်းစစ်သည်။ ပိုမို၍ မျက်နှာသာပေးသည့်ရာသီဥတုဇုန်များသို့ကြီးမားသောပြောင်းရွှေ့မှုများပြုလုပ်နိုင်မည့်နေရာတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ "
စုစုပေါင်းဒဿနပညာရှင်, သမိုင်းပညာရှင်, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များ, ရှေ့နေများ, မနုဿဗေဒပညာရှင်, စီးပွားရေးပညာရှင်များ, လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့သိသာထူးချွန်ကွောကျရှံ့ခွငျး၏ဗဟိုအဘို့အကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတစ်ခုအကြီးအကျယ်ယိုယွင်းလုပ်ဆောင်နေဓမ်မပညာရှငျမြား၌တည်၏။ Tricontinental အင်အားစုများကလိုအပ်ခဲ့လျှင်သူတို့paraît-, အနောက်ဆန့်ကျင်သူတို့၏ "စံတန်ဖိုးတောင်းဆိုမှုများ" စည်းကြပ်ဖို့ညှတျ "မတရားမှုကိုရှုတ်ချခြင်းနှင့်အရှက်နှင့်ထိတွေ့" အကြိမ်ပေါင်းများစွာခဲ့ကြသည်ဒေသ populate သောသူတို့ကဲ့သို့ပင် သူ  ။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများမှပြည်သူများအလှည့်အတွက်မျိုးစုံ "ဘေးဥပဒ်ကိုကး" "အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ပြည်နယ်၏စွမ်းရည်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှု" ဆုံးရှုံးနှင့်အကူအညီမဲ့တဲ့ "ခံစားမှုအားဖြင့်လွှမ်းမိုးခြင်းကိုရင်ဆိုင်နေရနိုင်ဘူး။ "ကုမ္ပဏီ၏ခွန်အားမရှိခြင်းကြောင့်လူသည်အတွင်းထွက်ခွာသွားဒါမှမဟုတ်ညာဘက်သို့မဟုတ်ကျန်ရစ်၏အစွန်းရောက်ဝါဒ၌ခိုလှုံယူပြီး, အာဏာရှင်တွေနဲ့စစ်ပွဲတွေမြှင့်နိုင်ပါ။ "
ထူးချွန်၏ဗဟို "စံချိန်စံညွှန်းအမိန့်၏လေ့ကျင့်ရေး" အဖြစ်, အနီးကပ်ဆုံးစွန်သော, "အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးယဉ်ကျေးမှုေူပာင်းလဲရေးကို" (Sicherheitskultur im Wandel SiW) နှင့်ဆက်စပ်စီမံကိန်းမျှော်မှန်းဆင့်ကဲတန်ပြန်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ အဆိုပါ SiW သန်းတဦးတည်းကိုကျော်နှင့်ထူးချွန်၏နှစ်ခုလုံးအတွက်အလုပ်လုပ် Frankfort နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ခရစ္စတိုဖာ Daase ၏ညှနျကွားမှုအောကျ၏ညှိဖို့ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာန (BMBF) ကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးများအတွက် Hessian ဖောင်ဒေးရှင်း (HSFK) သည်။ အဆိုပါ BMBF ၏စကားမှာ SiW အစီအစဉ်ကို "အရပ်ဘက်လုံခြုံရေးသုတေသန" ဖို့ဝန်ကြီးဌာနကကို set up နှင့် "လူမှုရေးရှုထောင့်  လေ့လာနေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီလယ်ပြင်၌အခြားသိပ္ပံနည်းကျစီမံကိန်းခံနိုင်ရည်သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်မှု  မှမဟုတ်ဘဲအနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း '' ခံနိုင်ရည်တိုးမြှင့်အပေါ်ဥပမာ addressing နေကြသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်တဦးတည်းလည်းပြင်ပပဋိပက္ခများနှင့်ဂျာမနီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရှိနထေိုငျသူမြားအစ္စလာမ်မစ်များ၏အစွန်းရောက်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့မည်သို့မည်ပုံ "အံ့ဘွယ်သောအမှု။ "
ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းစီမံကိန်း "အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးယဉ်ကျေးမှုေူပာင်းလဲရေးကို" အစိုးရနှိမ်နင်းမှု၏ဂျာမန်လူဦးရေအားဖြင့်လက်ခံမှု၏ဒီဂရီကို examine ။ ပွိုင့်မှ စတင်. အောက်ပါတွက်ချက်မှုဖြစ်ပါသည်: "အချို့သောအုပ်စုများအဓိကလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုစဉ်းစားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏နည်းစနစ်အသစ်တွေအတည်ပြုနေစဉ်, အခြားအုပ်စုများကိုသူတို့အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ခြိမ်းခြောက်ခံစားရတယ် အဲဒီ anti-အကြမ်းဖက်ဝါဒအစီအမံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ " ဤအခြေအနေတွင်မှာကိုရှောင်ရှားဖို့" ဖြစ်နိုင်သမျှလူမှုရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကြီးထွားလာဗဟုဝါဒကိုရှင်းလင်းစွာ "အန္တရာယ်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွား" ကြဘူးပါဘူး " လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေ Frankfurt အယူခံဝင်ဖို့အစိုးရသောမင်းတို့အကြံပြု ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစေရန်, "လုံခြုံရေးသရုပ်ဆောင်များကိုပြည်နယ်ပေါ် မူတည်. မဟုတ်" နှင့် "co-အသီးအနှံလုံခြုံရေးနှင့်အတူတရားစွဲဆိုဖို့။ လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်မှု "အထွေထွေ" ဟု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်  "လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ Interconnection မန်နေဂျာနှင့်လေယာဉ်မှူး" ကျနော်တို့ကအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ပြည်နယ်လို "။
ဤအတောအတွင်းအဆိုပါ Frankfurt-based သုတေသီများတောင်ထဲမှာစစ်ဆင်ရေး၏အောင်မြင်မှုများအတွက်အလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်သူတို့အစိုးရတွေမရှိတော့နိုင်ငံသားများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်နိုင်ကြသည်နေရာတိုင်းမှာ "နိုင်ငံတကာဥပဒေအရအသိအမှတ်ပြုကြားဝင်ရန်တာဝန်၏နိယာမကိုစောင့်ထိန်းသော" စစ်လူသားတှကေို "အမည်ခံ။ အကြပ်အတည်း - " အဘယ်မှာသူတို့တစ်ချိန်တည်းအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့တွေ့မြင်တစ်ဦးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်" ":" ပထမဦးစွာကျနော်တို့နောက်ထပ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတားဆီးဖို့နိုင်ငံရေးကမ္ဘာကြီးပျံ့မိန့်ဖြေရှင်းရန်; ဒုတိယအအများအပြားလေ့လာသူများကစစ်တပ်လည်းစျေးကြီးသို့မဟုတ်ထိရောက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ပင်တရားမဝင်ဆိုလိုတယ်စဉ်းစားပါ။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့်လိုအပ်သည့်ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်အများပြည်သူအမြင် "နှင့်" ထိရောက်သောနိုင်ငံရေးအအလိုတော် "အကြား" တင်းမာမှု "ဟုအဆိုပါဖယ်ရှားပစ်ရန်" ထားရန် "ဖြစ်လိမ့်မယ်" "တစျခုသောအရာကိုအံ့ဘွယ်သောအမှု" ။ "ပြည်နယ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအသင်းများ" ၏မူဘောင်အတွင်း interdepartmental ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု " တစ်ဦး Self-ကိုယ်စားပြုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လုပ်ဖို့အကြံပြုချက်များအထူးသတဲ့အတွက်ကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်း၏အခြေခံပေါ်မှာ, မျက်မြင်လက်တွေ့ဆည်းကပ်ရပါမည်" အာဖဂန်နစ္စတန်၌တည်၏။ "
အကြမ်းဖက်ဝါဒ, စစ်, ရွှေ့ပြောင်း
လုံခြုံရေးယဉ်ကျေးမှုစီမံကိန်းဒီဇိုင်းကို "သုတေသန" ေူပာင်းလဲရေးကိုဖြည့်စွက်ဖို့ကျနော်တို့၏ကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးရောင်ပြန်ဟပ်မှု add "ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ်ဆက်သွယ်ရေး။ " "လုံခြုံရေးမူဝါဒ၏သရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်နိုင်ငံသားများအကြားအချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှု" နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၏ "တရားဝင်မှု" နှင့် "ထိရောက်မှု" အတွက်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် "ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမက်ဆေ့ခ်ျထဲမှာရှုပ်ထွေးပြီးဒေတာလုံခြုံရေးမူဝါဒအထုပ်ပိုးထားရမည်နှင့် ရိုးရှင်းတဲ့။ "ဒီအထူးသဖြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း" နိုင်ငံသားအစပျိုးနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့များကို "အထူးသဖြင့်အဖြစ်" ဟုအဆိုပါပြည်ပမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒ, ရလဒျ, စစ်တပ်ကြားဝင်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ် migration 'ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပိုပြီးအလေးချိန် "မီဒီယာအသစ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်။ "[ဆစ်]
ယခုပင်လျှင်, အတိတ်ထဲမှာကျနော်တို့ Frankfurt တက္ကသိုလ်မှ "အရပ်ဘက်လုံခြုံရေးအပေါ်သုတေသနပြု" ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဥပမာ, 2010 အတွက်အဆုံးစွန်၏ရူပဗေဒ၏ Institute မှလေဆိပ်အတွက် "ခန္ဓာကိုယ်စကင်နာများ" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်သင်ယူ; အတူတူသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထားပြီးနေတိုးအဘို့ဤအမျိုးအစားတစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း, သို့သော်, Frankfurt တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များသာ "ငြိမ်းချမ်းသောရည်ရွယ်ချက်များအားဝတျပွုပါမညျသောက" ပြည်တွင်းစစ် "အပိုဒ်ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ "သုတေသနအုံကြွမှုရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်ရပါမည်, စစ်တပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပိုကောင်းအောင်ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ရန်။
Harriet Tubman တစ်ဒေါ်လာစျေးဥပဒေကြမ်းအပေါ်ပေါ်လာဖို့ပထမဦးဆုံးလူမည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး 20
အားလုံးမှား - မျှော်လင့်ချက်စာအုပ် - မာ့ခ်မန်ဆင် (အသံ)
လူသိများသောမှလွတ်မြောက်ခြင်း - Jiddu Krishnamurti (အသံ)
အာဖရိက၏အထွေထွေသမိုင်း - အတွဲ ၄ (PDF)